उपत्यकामा यसकारण पराजित भयो माओवादी | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
त्यो एउटा समय परिस्थितिको कुरा थियो। इतिहासमा सधैँ त्यस्तो जनविश्वास पाउन कठिन छ। त्यसमा पनि काठमाडौंका जनताको एउटा हिस्सा सधैँ मुख्य शक्तिको विरुद्धमा व्यङ्ग्यात्मक रुपमा व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ। यो यस उपत्यकाका जनताको प्रवृत्ति नै बनेको देखिन्छ। यहाँ कहिलेकाहीँ नकरात्मक अभिव्यक्ति दिनका लागि राजनीतिलाई व्यङ्ग्य गरिन्छ। अहिले मात्रै होइन, पञ्चायतकालमा नानीमैया दाहाल, काले सार्की, गोल्छे सार्कीलगायतलाई जुन मत परेको थियो, त्यो अनपेक्षित थियो। नानीमैयाले त्यतिबेला ६४ हजार मत ल्याएकी थिइन्। त्यसैगरी काले सार्कीलाई उम्मेदवार बनाउने कुरा गर्दा उनको पक्षमा ठुलो जनमत देखियो, जसले उनले जित्ने सम्भावना देखाउँथ्यो। काले सार्की न्युरोडमा जुत्ता पोलिस गर्थे। त्यसपछि काले सार्कीलाइ अपहरण गरेर लुकाइयो र उनका सट्टा गोल्छे सार्कीलाई अघि ल्याइयो। उनले पनि १० हजार मत ल्याएका थिए।
राजनीतिमा सधैँ ठिक कुराले मात्रै विजय हासिल गर्ने भए भए दार्शनिकहरु नै प्रधानमन्त्री हुन्थे होला। दार्शनिकहरु सत्तामा आउँदैनन्, किनभने उनीहरुले संगठन बनाउँदैनन्। त्यसकारण माओवादीले मेहनत गरेन भने, व्यवस्थित ढङ्गले अभियान चलाएन भने, विरोधीले प्रचार गरेको गलत कुराको खण्डन गरेन भने स्वाभाविक रुपमा पछि पर्छ। त्यसकारण उपत्यकामा पराजय हुनुको कारण पहिचान गरेर अगाडिको दिशा तय गर्नु नै माओवादीको आजको आवश्यकता हो।
अहिले उपत्यकामा माओवादी केन्द्रको हारका पछाडि तीन वटा कारण रहेका छन्:
माओवादीले आफ्ना एजेण्डा व्यवस्थित ढङ्गले लग्यो, सबैलाई ‘स्वीप’ गरेकै हो। जुन बेला माओवादी आफै फुटेको, संगठन लथालिङ्ग रहेको र उम्मेद्वार को हो भन्ने कुरा पनि राम्ररी थाहा नदिएको अवस्था आयो, माओवादी आफै ‘स्वीप’ भयो। स्थानीय निर्वाचनले पहिलोचोटी माओवादी वैधानिक रुपमा धर्तीमा गाडियो। पहिले त माथिमाथि सतहमा संगठन त थियो तर वैधानिक रुपमा जरा गाडेको थिएन। अब वैधानिक रुपमै जनताले चुनेर स्थानीय निकायमा पठाएका छन्। अरु पार्टीहरुको कुरा गर्ने हो भने कुनै पार्टी २०१५ सालदेखि नै धर्तीमा छन्। कोही ०४६ सालदेखि नै धर्तीमा गाडिएर रहेका छन्। माओवादीको त्यो स्थिति थिएन।
दोस्रो, विशेषतः काठमाडौँ महानगरमा चुनावी अभियान दृढताका साथ हुँदै भएन। कतिपयलाई त माओवादीको चुनावी अभियानबारे थाहा समेत भएन। राजधानी रहेको देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण महानगरमा माओवादी केन्द्रको चुनावी अभियानले केन्द्रीय महत्व नै पाएन।
काठमाडौंका जनताको एउटा हिस्सा सधैँ मुख्य शक्तिको विरुद्धमा व्यङ्ग्यात्मक रुपमा व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ। यो यस उपत्यकाका जनताको प्रवृत्ति नै बनेको देखिन्छ। यहाँ कहिलेकाहीँ नकरात्मक अभिव्यक्ति दिनका लागि राजनीतिलाई व्यङ्ग्य गरिन्छ। अहिले मात्रै होइन, पञ्चायतकालमा नानीमैया दाहाल, काले सार्की, गोल्छे सार्कीलगायतलाई जुन मत परेको थियो, त्यो अनपेक्षित थियो। नानीमैयाले त्यतिबेला ६४ हजार मत ल्याएकी थिइन्।
बागमती उपत्यकामा माओवादीले भएको संगठनलाई व्यवस्थित संगठीकरण गर्न सकेको छैन। त्यसैको परिणाम चुनावमा देखिएको हो। अर्को कुरा, सरकारमा बसेर एउटा दुईवटा राम्रा काम गर्नेबित्तिकै त्यसको फल तुरुन्तै पाइन्छ भन्ने हुँदैन। हरेक चिजको मात्रा हुन्छ, मात्राबाट गुणमा फड्को मार्नु पर्ने हुन्छ। त्यो मात्रा जनताको निगरानीमा हुन्छ। जनताले त्यसको प्रवृत्ति हेरिरहेकै हुन्छ। माओवादीप्रति सहरिया मध्यमवर्गका जनता केही कमजोरीका लागि आलोचना गर्न सक्ने ठाँउमा त पुगेका छन् तर माओवादीप्रति अनुराग जन्मिने स्तरमा पुगेका छैनन्। त्यसको निम्ति माओवादीले सिर्जनात्मक रुपमा काम गरिरहनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र गुणमा फड्को मार्न सकिन्छ। जनताको मनमा अनुराग पैदा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई संगठनमा ढाल्नु पर्छ।
माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा ठुलो संकट तोड्यो। यसको परिणाम अहिले देखा पर्ने होइन, यसको परिणाम त धेरै पछि देखा पर्छ। अहिलेको अहिल्यै खोज्नु भनेको त तातै खाऊँ जल्दै मरौँ भनेजस्तै हो। माओवादीले आफ्नो स्थान जोगाउन मात्रै सफल भएन, पहिलेभन्दा उसले गुणत्मक रुपमा नै मत थपेको छ। पहिलेको २६ जनाले जितेको संख्या हेर्ने हो भने त्यो १० प्रतिशत हो, अहिलेको जित १७ प्रतिशतमा छ।
सरकारमा बसेर एउटा दुईवटा राम्रा काम गर्नेबित्तिकै त्यसको फल तुरुन्तै पाइन्छ भन्ने हुँदैन। हरेक चिजको मात्रा हुन्छ, मात्राबाट गुणमा फड्को मार्नु पर्ने हुन्छ। त्यो मात्रा जनताको निगरानीमा हुन्छ। जनताले त्यसको प्रवृत्ति हेरिरहेकै हुन्छ। माओवादीप्रति सहरिया मध्यमवर्गका जनता केही कमजोरीका लागि आलोचना गर्न सक्ने ठाँउमा त पुगेका छन् तर माओवादीप्रति अनुराग जन्मिने स्तरमा पुगेका छैनन्। त्यसको निम्ति माओवादीले सिर्जनात्मक रुपमा काम गरिरहनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र गुणमा फड्को मार्न सकिन्छ। जनताको मनमा अनुराग पैदा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई संगठनमा ढाल्नु पर्छ।
एजेन्डा र संगठनलाई सन्तुलन मिलाएर लैजाने हो भने माओवादीले थप प्रगति गर्दै जाने निश्चित छ। यही उपत्यकामा जुन बेला माओवादीले आफ्ना एजेण्डा व्यवस्थित ढङ्गले लग्यो, सबैलाई ‘स्वीप’ गरेकै हो। जुन बेला माओवादी आफै फुटेको, संगठन लथालिङ्ग रहेको र उम्मेद्वार को हो भन्ने कुरा पनि राम्ररी थाहा नदिएको अवस्था आयो, माओवादी आफै ‘स्वीप’ भयो। हिटलरले पनि कुनै समय राम्रैसँग शासन चलाएकै थियो, लोकप्रिय भएर। जर्मनीका जनताले चुप लागेर उसैलाई साथ दिएका थिए। यता अहिले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को दुई तिहाई आउन थालिसक्यो। के त्यसो भने हिटलर वा भाजपाको लाइन ठिक हो त? सेकुलारिजमकै विरुद्ध जाने भाजपा पनि ठिक हो त?
पुनःप्रकाशित, २१ जेठ २०७४ (4 June 2017) ।
बाहुन काँठा : बाहुनकै वकपत्र
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यक्ष प्रश्नः अब के गर्ने, के नगर्ने ? : अरुण बराल
Posted by admin on Jun32017. Filed under Breaking News, दृष्टिकोण, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
1 Comment for “उपत्यकामा यसकारण पराजित भयो माओवादी”
September 26, 2017 - 8:40 am
QpXmOX Im grateful for the article.Really looking forward to read more. Really Great.